War saxafadeed ka soo baxay Hey’ada UNFPA kagana hadashay Kufsigii iyo Dilkii Caa’isha Ilyas – Walaal24 Newss
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Wakiilka UNFPA ee Soomaaliya, Nikolai Botev, Wakiilka UNFPA ee Soomaaliya Mr. Anders Thomsen, iyo madaxa UNFPA Dr. Maryan Qaasim.
Garoowe, 26 Febraayo 2019 – Waxaanu la yaabnay dhimashada 12-jir Aisha Ilyes Aden oo si ba’an loo dilay ka dib markii lagu afduubay, lagu kufsaday, laguna jirdiley waqooyiga Galkacyo.
Iyadoo hay’adda Qaramada Midoobay ee caalamiga ah ee caalamiga ah ay mas’uul ka tahay inay joojiso rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha, UNFPA ayaa cambaareeynaysa falkan fashilmay ee rabshadaha ku salaysan jinsiga.
Rabshadda ku salaysan jinsiga waa xadgudub daran oo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha; kufsiga iyo dilalka Aisha ayaa ah tusaale xun.
Waxaa intaa dheer, sinaan la’aanta ay ka heshay dembiilayaasha, iyo cabsida ay abuurtay tallaabooyinkooda, waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan haweenka iyo gabdhaha. Rabshaduhu waxay ka tarjumaysaa oo ay xoojinaysaa takooridda haweenka iyo gabdhaha, iyagoo ku waasaaraya marxalad khalkhal gelinaysa horumarkooda iyo horumarkooda.
UNFPA waxay la taagan tahay qoyska Aisha waxayna si buuxda u taageertaa hay’adaha, bulshooyinka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa la dagaallanka colaadda ku salaysan jinsiga iyo xuquuqda haweenka ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. UNFPA waxay ku baaqeysaa in baaritaan deg-deg ah lagu sameeyo dilka Aisha iyo in lagu hirgeliyo Xeerka Dembiyada Galmada, taas oo dambi-galisa dhamaan dambiyada galmada ee Dowladda Puntland.
Ma jirto meel ka mid ah rabshadaha ka dhanka ah gabdhaha iyo haweenka adduunka ee maanta iyo mustaqbalkaba waxaan ku dadaaleynaa in aan abuurno meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah ay sii korodho awoodda ay leedahay, xuquuqda aadanaha iyo sinnaanta. Maantana iyo maalin kasta, aan u istaagno xuquuqda aadanaha, amniga iyo sharafta dumarka iyo gabar kasta meel kasta.
Macawiisleyda Gobolka Hiiraan oo Al-shabaab ka furtay Hub kana dilay dagaalyahano badan
Baarlamanka cusub ee maamul Goboleedka Jubaland oo la dhaariyay